Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / In la yimi Iswiidhan
Haddii aad joogto Iswiidhan waa inaad adigu la xiriirtaa Hey'adda Socdaalka. Adigu waa inaad tagto mid ka mid ah Hey'adda Socdaalka xarumaheeda la iska dhiibo.
Hey'adda Socdaalka xarumaheeda la iska dhiibo waxay ku yaalaan Göteborg, Malmö iyo Stockholm. Caruurta yimi Iswiidhan iyadoo aanay waalid la socon waxay codsi magan-gelyo ka samayn karaan Boden, Norrkköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala iyo Örebro.
Dheeraad ku saabsan imaatinka Iswiidhan ka akhriso bogga Hey'adda Socdaalka. Eeg cinwaanada Hey'adda Socdaalka xarumaheeda la iska dhiibo. Warbixintan waxay ku qorantahay oo keliya iswiidhish iyo ingiriisi.